Nanapa-kevitra ny WeTransfer hanamboatra endrika ny sariny | Famoronana an-tserasera
Ny serivisy fifanakalozana sy fitehirizana antontan-taratasy WeTransfer, nanapa-kevitra ny hamolavola endrika ny sariny. Tsy mbola nanao fanovana lehibe toy izany ny orinasa hatramin'ny nanombohany ny taona 2009.
We Transfer dia serivisy, izay mamela ny fizarana rakitra be tsy mila mamorona kaonty hizara sy hisintona rakitra. Maimaimpoana raha mandefa rakitra tsy lehibe noho ny 2GB ianao, tombony ho an'ny matihanina amin'ny sehatry ny endrika izany. Amin'ny maha kreatiora antsika dia afaka mampiasa an'io isika fanompoana matihanina miaraka amin'ireo masoivoho sy mpanonta.
Ekipa miasa avy any Amsterdam sy Los Angeles no nanangana azy. Ireo mpamorona azy ireo azy ireo sehatry ny famolavolana, marketing ary haino aman-jery. Ny fahaizan'ny mpamorona dia tombony lehibe ananan'izy ireo, satria fantatr'izy ireo ny filan'io sehatra io ary izany no antony iray amin'ny serivisy ampiasain'ny creatives ity serivisy ity.
Ao amin'ny endrika redesign dia nisafidy a fanovana minimalist kokoa, fanovana ny paleta miloko, typography ary interface. Ny logo dia namboarina niaraka teo anelanelan'ny talen'ny famoronana WeTransfer, Laszlito Kovacs, ary ilay mpanoratra milalao an-tsoratra Paul van der lann. Amin'ny maha-aingam-panahy azy dia nanomboka tamin'ny marika voalohany tamin'ny 2009 izy.
Ao amin'ny kinova vaovao, ny litera lehibe roa an'ny redesign dia grayscale ary nivelatra ny vatanao miaraka amin'ny sasany vita malefaka, angamba mba hifanaraka tsara kokoa amin'ny sary miaraka amin'ny sary nataon'ireo mpanakanto. Fanitsiana hafa nataon'izy ireo, dia ny fisokafan'ny litera "E" ary ny fiolahana vaovao eo amin'ny faritra ambony amin'ny "W". Raha ny amin'ny teny hoe "Transfer", izay niseho tamin'ny sary famantarana teo aloha, dia voafafa izany.
Ny sary famantarana taloha:
Ny sary famantarana vaovao:
Amin'ity tonony ity dia misy sary tsy miandany kokoa azo. Araka ny fanazavan'ny orinasa "rehefa litera tsotra roa ny sary famantarana anao dia tsy ampy intsony ny tsara. Mila lavorary izy io, hatrany amin'ny antsipiriany kely indrindra. Ny kinova mainty sy fotsy dia tokony hijery voalanjalanja amin'ny habe rehetra ary haneho hatrany ny endrika tsy manam-paharoa. "
Raha te hahita sy hanadihady bebe kokoa momba ny famolavolana endrika vao haingana ianao dia afaka mandeha eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Nanapa-kevitra ny hanova endrika ny sariny ny WeTransfer